फ्रान्समा २८ हजार ६ सय बढीको मुत्यु, कति छन् संक्रमित ? - Lokpath Lokpath
२०७७, १७ जेष्ठ शनिबार ००:२२
फ्रान्समा २८ हजार ६ सय बढीको मुत्यु, कति छन् संक्रमित ?
प्रकाशित मिति : २०७७, १७ जेष्ठ शनिबार ००:२२
काठमाडौं । कोरोना महामारीले अहिले सारा विश्व नै त्रस्त छ । फ्रान्समा हालसम्म कोरोनाको कारण २८ हजार ६ सय ६२ जनाको ज्यान गएको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म फ्रान्समा १ लाख ६ हजार २ सय ३ जनामा कोरोना संक्रमण फैलिएको वल्डोमिटरको तथ्यांकले देखाएको छ ।
त्यस्तै हालसम्म ६७ हजार १ सय ९१ जना कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् भने संक्रमित मध्ये १ हजार ४ सय २९ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ३ लाख ६४ हजार ३ सय ६० पुगेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म विश्वभर ५९ लाख ७१ हजार ५ सय ६३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
साझा पार्टीबाट बाहिरीए खनाल र आचार्य